नेपालको संचार – newsanchar.com | कांग्रेसमा को बन्ला पौडेल समूहको साझा उम्मेदवार ?
कांग्रेसमा को बन्ला पौडेल समूहको साझा उम्मेदवार ?
‘यता आएर तपाईंको माहोल राम्रो छ, छोड्नु हुन्न भन्ने । उता गएर पनि त्यही भन्ने । सबै नेतालाई भेट्ने र तपाईं उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्दै उकास्ने,’ २६ साउनमा जिल्ला सभापतिको भेलामा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘अनि समूहबाट एक जनामात्रै उम्मेदवार कसरी हुन्छ ?’ समूहभित्र एकताबद्ध उम्मेदवारी हुनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको दबाबपछि कोइरालाको प्रतिक्रिया थियो, ‘जसको ग्राउन्ड राम्रो छ, राम्रो भनिदिनुस् । जसको कमजोर छ, कमजोरै भनिदिनुस् ।’
१४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया वडाबाट सुरु हुँदै गर्दा कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाइतर पक्षबाट सभापति पदमा एक जनामात्रै उम्मेदवार बनाउन आकांक्षीहरूको ‘ग्राउन्ड परीक्षण’ सुरु भएको छ । जिल्ला सभापतिको भेला, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबमा कोइराला र प्रकाशमान सिंहसमेत सम्मिलित रामचन्द्र पौडेल समूहका मुख्य चार आकांक्षी नेताहरूले बिहीबार एक जनामात्रै उम्मेदवार बन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए । पौडेल समूहबाट साझा उम्मेदवार बन्ने नेताहरूको वचनले कांग्रेसवृत्त तरंगित बनेको छ । वडा अधिवेशनसँगै नेताहरू वडाबाटै आफूनिकटलाई निर्वाचित गराएर तल मजबुद पार्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।
देउवाइतर पक्षबाट १३ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा निर्वाचित शशांक कोइराला, सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र पहिलो निर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान सिंह प्रमुख आकांक्षी छन् । यसअघि एक जनामात्रै उम्मेदवार चुन्ने सन्दर्भका छलफलमा सहभागी भएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने देखिएनन् । तर, १३ औँ महाधिवेशनमा भने देउवा समूहबाट महामन्त्री लडेका अर्जुननरसिंह केसी र सिटौला समूहबाट महामन्त्री लडेका गगन थापा संस्थापनइतर पक्षबाट साझा उम्मेदवारीकै पक्षमा देखिए । ‘हाम्रो समूहबाट एउटामात्रै सभापतिको उम्मेदवार दिन्छौँ । त्यसका लागि म साथीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दछु,’ कोइरालाद्वय र सिंहलाई दायाँ–बायाँ राखेर नेता पौडेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भने ।
१३ औँ महाधिवेशनमा आफ्नै समूहको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पराजय बेहोरेको पौडेल समूहले कांग्रेस नेतृत्वमा बीपी, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको लिगेसी फर्काउला ? वा फेरि देउवाले नै बाजी मार्लान् ? वडा अधिवेशनसँगै कांग्रेसजनको चासो यतातर्फ केन्द्रित बनेको छ । साझा उम्मेदवारीको प्रतिबद्धताले तल्ला तहमा नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई आत्मबल र साहस प्रदान गर्ने तथा तल्ला तहबाटै आफ्नो समूहको सहभागिता बढेर आउने दबाबमा नेताहरूले सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । तर, साझा उम्मेदवारी चयन त्यति सजिलो भने देखिँदैन । नेताहरू सबै एकताबद्ध भएर लड्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । तर, मेरै नाउँमा सहमति र एकता हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अडान भने कायमै छ ।
साझा उम्मेदवारीको प्रतिबद्धताले नेताहरूलाई अब सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बन्धनमा बाँधेको छ । ‘यदि नेताहरूले यो लोकाचारका लागि मात्रै भनेको भए पनि अब एउटा बन्धनमा बाँधिएका छन् । अब सहमति गर्नैपर्ने दबाब नेताहरूलाई पनि पर्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘जब क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउन थाल्छन् । चार जना आकांक्षीहरूलाई तपाईंहरू एक हुनुपर्यो भने दबाब दिन थाल्छन् । त्यसपछि एउटा विन्दुमा पुगेर सहमति हुनसक्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी नेताहरू अहिले साझा उम्मेदवारी दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुका पछि दुई कारण भएको बताउँछन् । पहिलो–देउवाले कांग्रेस बचाउन सकेनन् भन्ने निष्कर्ष । र, अर्को देउवालाई पराजित गर्न सामूहिक मोर्चाबन्दीको विकल्प नहुनु । ‘देउवाजीले कांग्रेस बचाउन सक्नुभएन । अब पनि उहाँकै हातमा कांग्रेस सुम्पिने हो भने कांग्रेस बच्दैन । कांग्रेस बचाउनुपर्‍यो भन्ने निष्कर्ष हो,’ केसी भन्छन्, ‘यताबाट धेरै जना उम्मेदवार भए देउवाजीलाई नै सहयोग पुग्छ, त्यसैले एउटामात्रै उम्मेदवार बनौँ भन्ने सहमति बनेको हो ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पार्टी र संगठनको भविष्यबारे चिन्ता गरेर नेताहरूले साझा उम्मेदवारीको प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन् । ‘साढे पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टी र त्यहाँभित्रका बेथितिलाई नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । पार्टीको आन्तरिक अव्यवस्थालाई हटाएर जरैदेखि पार्टीको संगठनलाई मजबुद बनाउनुपर्ने आवश्यकताको बोध सबैलाई भएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प छैन भन्ने सबैले बुझेकाले त्यो कसरी सम्भव छ ? भन्ने पनि नेताहरूलाई थाहा छ । सबै एकैपटक एउटै पदमा पुग्ने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि कसै न कसैले त्याग गर्नुपर्छ । एकताको विकल्प छैन ।’
तर, अहिले कसको नाममा सहमति गर्ने भन्नेबारे नेताहरूबीच छलफल नै भएको छैन । ‘कसको नाममा सहमति गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन । हामीले सभापतिसँगै पदाधिकारीमा पनि सर्वसम्मतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ भनेका छौँ । साझा उम्मेदवारी दिने भनेपछि सबै अटाउनुपर्छ भन्ने हो । सिंगो समूहलाई प्रतिनिधित्व गराउने खालको टिम बनाएर चुनावमा जाने भन्ने हो,’ नेता केसीले भने ।
नेता घिमिरे भने १४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण दुवै हुने बताउँछन् । ‘अहिले सभापतिका लागि चार जनाको रसाकस्सी छ । अन्तिममा हुने उहाँहरूमध्येबाटै हो । मुख्य कुरा टिम नै हो, तर व्यक्तिगत लोकप्रियता पनि चाहिन्छ भन्ने पाठ अघिल्लो महाधिवेशनबाट मिलेकै छ । त्यसैले समूह घोषणा गरेर मात्रै जितिदैन । नेताको व्यक्तिगत लोकप्रियता पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।
उनले सभापतिको उम्मेदवार चयनको आधार प्रस्ट हुनुपर्ने सुझाउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले साझा उम्मेदवारीको प्रतिबद्धताले देशभर एकताको सन्देश गएको छ । अब जिल्ला र क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएपछि ४०–४५ जिल्लामा हाम्रा सभापतिहरू आउनुहुन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कसले जितेर आउँछन् ? प्रदेशमा कसले जित्छ ? त्यहाँ निर्वाचित नै केन्द्रका मतदाता हुन् । उनीहरूको सुझाव के हुन्छ ? त्यही आधारमा कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने ? भन्ने टुंग्याउनुपर्छ ।’
साझा उम्मेदवार बन्न अब हरेक आकांक्षीले तीन जनालाई विश्वासमा लिनुपर्ने स्थिति छ । यसअिघ शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले एक्लै भए पनि लड्छु भन्दै आएका थिए । यो प्रतिबद्धतापछि अब एक्लै लड्छु भनेर हिँड्न उनीहरूलाई सहज छैन । यो प्रतिबद्धतामा इमानदार हुने हो भने उनीहरूले पनि अब रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालाले जस्तै सल्लाह गरेर उम्मेदवारी दिन्छौँ भन्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो प्रतिबद्धतापछि वरिष्ठ नेता पौडेललाई केही सहज भएको छ । किनकि सहमति गर्ने पहिलो आधार चारैजना आकांक्षी अटाएर टिम घोषणा गर्ने हो । त्यसो गर्दा सबैभन्दा सिनियर भएको हिसावले पौडेललाई फाइदा पुग्छ । उनी सभापतिको उम्मेदवार बन्दा अरु तीन जना आकांक्षी उनको उपसभापति र महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्छन् । अरु तीन जनाले एकले अर्कालाई नछाडेको अवस्थामा पौडेललाई त्यसको फाइदा पुग्नसक्छ ।
तर, पौडेल अघिल्लो महाधिवेशनमै देउवासँग पराजित हुन् । त्यहीकारण उनको पक्षमा नेता कार्यकर्ताको भने समर्थन नजुट्न सक्छ । ‘रामचन्द्र दाई अघिल्लो पटक कार्यवाहक सभापति नै हुनुहुन्थ्यो । पार्टीको नेतृत्व, पार्टी सत्ता सबै उहाँसँग थियो । टिमबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्षले जिते, उहाँले जित्नुभएन । उहाँको लोकप्रियता परीक्षण भइसकेको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसैले अहिले जनमत कतातिर आकर्षित छ ? कसले अहिलेका चुनौतीलाई पार लगाउन सक्छ ? यी सबै हेर्नुपर्छ ।’
निकटस्थहरूका अनुसार कोइराला र सिंह पनि अब पुनः पौडेललाई सभापतिमा अघि बढाउन चाहँदैनन् । बरु कोइराला परिवार नेतृत्वमा ुकमब्याकु हुन चाहन्छ । तर, त्यसका लागि पहिले तीन कोइराला एक ठाउँमा हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘हामी जबसम्म एक्ला–एक्लै आकांक्षा राख्छौँ, त्यो बेलासम्म हामी उम्मेदवार होइन भन्ने उहाँहरू दुवै जनालाई थाह छ,’ कोइराला परिवार निकट एक नेता भन्छन्, ‘छलफल गर्दै जाँदा कसले कसलाई गलाउँछ भन्न सकिन्न । तर, दुई कोइरालामध्ये जसको नाममा सहमति भए पनि उसको वरिपरि ध्रुविकरण हुनसक्छ ।’ तर, कोइराला परिवारमा पनि दुई नेताका आ–आफ्नै आकांक्षा छ । दुई जनाको सहमति बन्ने वातावरण अहिले बनिसकेको छैन ।
१३ औँ महाधिवेशनमा शेखर र शशांक दुवै जना महामन्त्रीका आकांक्षी थिए । अन्तिममा शेखरले शशांकलाई छाडिदिए । तर, केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित भएका उनले लगत्तै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भन्दै देश दौडाहा गरे । महामन्त्रीमा निर्वाचित शशांकले पार्टीमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेनन्, न त कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय कार्यक्रम र योजना नै दिए । बरु उनी आफ्नो कसैलाई पनि नबिझाउने स्वभावले लोकप्रिय रहेको बताउँछन् । आफूले बाहेक अरु कसैले देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने उनको दाबी त छँदैछ ।
शेखर आफूलाई देशभरिका कार्यकर्ताले सभापतिमा हेर्न चाहेको दाबी गर्छन् । उनलाई पार्टीको नयाँ पुस्ता र युवाहरूको साथ छ । तर, उनी साझा उम्मेदवार बन्दा अरु तीन जना टिममा अटाउँदैनन् । पूर्वपदाधिकारी र सिनियर नेताहरू उनलाई चाहँदैनन् । नेता सिंहले पनि अघिल्लो महाधिवेशनमै त्याग गरेकाले अहिले आफू स्वाभाविक उम्मेदवार भएको बताउँदै आएका छन् । १२ औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित महामन्त्री सिंह १३ औँ मा सभापतिको आकांक्षी भए पनि पौडेललाई सघाएका थिए । एक नेताका अनुसार चार नेतामध्ये राजकीय पदहरूसहित सभापतिमा शक्ति बाँडफाँड गरेर साझा उम्मेदवारी चयन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
देउवा किन शान्त ?
गत ४ असारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएलगत्तै देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग भनेका थिए, ‘म अझै एकपटक सभापतिमा लड्छु । आगामी आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु ।’ देउवाले सातै प्रदेशका नेताहरूसँग बसेर आफ्नो रणनीतिक छलफल पनि गरे । त्यसबेलासम्म पार्टीमा कसैले पनि महाधिवेशनबारे त्यो स्तरको छलफल गरेको थिएन ।
अहिले देउवा समूहबाटै पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अझ पौडेल समूहले त आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेर साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दा पनि देउवा भने मौन नै छन् । उनले शुक्रबार बिहान भिडियो सन्देशबाट भने, ‘पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुस् ।’
उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पौडेल समूहको प्रतिबद्धताले देउवा समूहमा पनि स्वाभाविक रुपमा एकताको सन्देश दिएको छ । ‘इतरपक्ष एक भयो भनेपछि त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रुपमा समूहमा पर्छ । हामीले कुनै सन्देश दिनै परेन,’ ती नेताले भने । त्यही कारण देउवाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । ‘उहाँलाई यहाँ नेताहरूको अन्तर्य पनि थाह छ, एकताको सम्भावना कति ? भन्ने पनि थाह छ, त्यसैले अहिले धेरै रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने ठान्नुभएन होला,’ ती नेताले भने, ‘अब जे गर्नुपर्ने हो, त्यो जिल्ला अधिवेशनपछि हुन्छ ।’ तर, पौडेल समूह एकताबद्ध भएको अवस्थामा भने देउवालाई स्वाभाविक दबाब पर्छ ।
पार्टीभित्र लामो समय प्रतिपक्षमा बसेपछि कोइराला परिवारलाई पाखा लगाउँदै नेतृत्वमा पुगेका देउवा अहिले पार्टी र मुलुक दुवैको सत्तामा छन् । १३ औँ महाधिवेशनमा पनि देउवाले पौडेल समूहलाई फुटाएर जित हासिल गरेका थिए । उनको समूहबाट पदाधिकारीमा उनी एक्लैले जिते । उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री उनले मनोनित गरेका हुन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।